Home Wararka Gudaha South Sudan: Lax lagu xukumay saddex sano oo xarig ah kadib markii...
South Sudan: Lax lagu xukumay saddex sano oo xarig ah kadib markii ay ‘dishay’ haweenay!
Sida ay baahisay warbaahinta Eye Radio ee South Sudan, maxkamad maxalli ah ayaa saddex sanadood oo xarig ah waxa ay ku ridday neef ido ah kaddib markii lagu helay inay dishay haweeney ku sugneyd meel garoon ah.
Neefka idaha ah ayaa horraantii bishan waxaa lagu xiray South Sudan kaddib markii ay weerrartay haweeneyda, taas oo markii dambe u dhimatay dhaawacyadii soo gaaray, sida lagu sheegay warbaahinta MSN.
Booliska South Sudan ayaa dhanka kale u sheegay Eye Radio: “Neefka idaha ah ayaa hardi ku weeraray haweenayda oo heeraha ayey ka jajabisay, waxaana ay sheegeen in haweeneydu ay markiiba dhimatay.
Neefkaas ayaa markii uu soo dhammaysto xabsiga waxaa lagu qasbayaa inay la noolaato qoyska dhibbanaha.
Sida lagu baahiyay warbaahinta NDTV, maxkamad maxalli ah ayaa waxa ay kaloo xukuntay in ninkii lahaa neefkaasi idaha ah, Duony Manyang Dhal, ay tahay inuu bixiyo shan sac oo la siiyo qoyska dhibbanaha.
Nin xoolo uu lahaa beylihiyay oo lagu xukumay 9 bilood oo xabsi ah
Sac caan ah oo ay dadka u tartamayaan in ay sawir la galaan!
Neefkaas idaha ah ayaa saddexda sanadood ee xariga ah waxaa lagu hayn doonaa xarunta dhexe ee deegaanka Aduel ee gobolka Lakes ee South Sudan.
Idaacadda ayaa intaasi ku dartay in neefka idaha ah gacanta loo geliyay booliska, iyadoo maayirka magaalada Elijah Mabor uu radio Eye u sheegay “neefka idaha ah ayaa feeraha hardi kala dhacay haweeneyda waxyar kaddibna waa ay dhimatay.
Maayirka magaalada ayaa wareysi uu siiyay idaacadda Eye waxa uu kaloo ku sheegay in “milkiilaha neefkaasi idaha ah uu yahay qof aanan wax dambi ah gelin, balse cidda dambiga gashay ay tahay neefkaasi idaha ah taas oo mudan in la xiro, maxkamadna la soo taago.”
Lama oga ayuu raadiyuhu sii raaciyay in neefkaasi idaha ah uu ka qoomameeyay falka dambiga ah ee ka dhacay.
Previous articleShan qodob oo culeeskooda wata oo horyaala Lafta Gareen
Next articleBadri Cabdicasiis Saalax, ninka Maraykanka hal milyan dul dhigeen oo lagu qabtay xadka Soomaaliya
Maamulka Hoyga Xamar oo war culus ka soo saaray xiisada dhulka la isku heysto
HIRSHABELLE oo tallaabo qaaday maanta, kadib…
Guddoonka BF oo guddi u saaray baaritaanka miisaaniyadda dowladdii hore + Magacyada
Muuse Biixi oo cod u qaaday xeer doodiisa ay taagneyd maalmahan
Xildhibaanada labada Aqal oo ansixiyay miisaaniyadda Qaranka ee 2022-ka
Maxaa ka jira in $50 milyan loo heysto askarta ku muqan ERITREA?
Shirkada Isgaadhsiinta Itoobiya ee Ethio Telecom ayaa sheegtay
Man City oo loo diray digniin kulul ee ku aadan raacdada...
Maxkamadda Ciidamada oo toogasho ku xukuntay askari dilay Taliyihiisa